Dr Rado RAZAFINDRATSIMBA: Kandida Ben'ny Tanana Talatamaty laharana 01.
ACTUALITE/ ELECTION & PROPAGANDE/ Politique/ SOCIAL
Lynda ANDRIATSITONTA ben'ny tanana, Dr Rado, kandida	2 Comments juil 28, 2015
Kandida laharana 01 eny amin’ny kaominina Talatamaty avy ao amin’ny fikambanana « Ny Antsika » i Dr Rado RAZAFINDRATSIMBA. Mpifaninana mahaleotena ary tsy mpanao politika izy. Ben’ny tanana nitantana ny kaominina Talatamaty teo aloha ihany koa izy.
Betsaka ny zava-bita nandritra ny fitondrany ka mendrika ho tohizana izany, hoy izy. Manamporofo izany ny fahavitan’ny efitrano fianarana EPP sy CEG ary lycée, fanamboarana ny lalana sy ny lalan-kely, isaky ny fokontany. Ankoatra izany, nahazo tombontsoa taminy ihany koa ireo tantsaha teny an-toerana, toy ny fanomezana masom-boly sy fampindramam-bola tsy misy zanany.
Mbola maro anefa ny ezaka tiana ho tratrarina ka izany indrindra no nahatonga azy nilatsaka ho fidiana indray.
Nampafantatra ny fandaharan’asany tamin’ny mponin’ny Talatamaty izy sy ny ekipa mpiara-miasa aminy ny asabotsy teo. Ny sosialim-bahoaka no tena laharam-pamehana aminy.
Ny foto-drafitra asa momban’ny fampianarana, ny toeram-pitsaboina ary ny lalana no mahamaika an’ity kandida laharana 01 ity. Araka ny fanazavana azo, voafetra ho 300 monja ny mpianatra raisina ao amin’ny kilasy fahaenina ny sekolim-panjakana noho ny tsy fahampian’ny efitrano fianarana. Hanampy efitrano ianarana izy rehefa lany eo indray. Hanangana toeram-pitsaboina ho an’ny kaominina manokana na CSBII, ihany koa izy. Tsy atao ambanin-javatra anefa ny fanomezana rano fisotro madio sy toram-pidiovana, nambarany izany nandritra ny lahateniny.
Hametraka tantara eo amin’ny kaominina Talatamaty raha i dr Rado satria anisany tetikasa lehibe ao anatin’ny fandaharan’asany ny fanamboarana kianja manara-penitra lehibe izay anomezana lanja ny fanatanjahan-tena sy ny fialamboly.
Farany nefa zava-dehibe tokoa, ho jerena akaiky ireo tantsaha ao amin’ny kaominina ary atao vaindohan-draharaha amin’izany ny tsena.
Nohamafisiny fa vonona hanompo ny vahoaka izy fa tsy ho tompoina raha lany ho Ben’ny Tanana eo ary vonona hihaino ny feon’ny vahoaka hanatsarana ny tetikasa fampandrosoana rehetra. Marihina fa Kandida mahaleotena i Dr Rado, Tsy misakana ny tsy hiara-hiasa amin’ny fanjakana foibe anefa izany.
‹ Cours CPE: Manolotra faradoboka ho an’ny BACC sy BEPC.	› Gender Links: La femme prend une place importante dans le développement
juil 28, 2015	@ 09:22:07
juil 28, 2015	@ 09:22:08